BROADFOIL Bubble Aluminum Foil dia vahaolana ara-toekarena ho an'ny indostrian'ny indostria, ny famokarana ary ny fampiharana mpanjifa, toy ny ho an'ny trano indostrialy, trano ara-barotra, insulation an-trano, eo ambanin'ny gorodona hazo na laminated, insulation tafo, ambanin'ny karipetra ary fanorenana.
Data ara-teknika momba ny BROADFOIL Bubble Aluminum Foil
+ Foil miloko
AL+ Lamba tenona + Bubble
+ Lamba tenona+AL
1,2 m (natao)
BROAD kraft taratasy Mifanatrika no tena ampiasaina ho toy ny miatrika ny fitaratra volon'ondry insulation, rockwool, fingotra foam sns ary mety amin'ny trano fanatobiana entana, orinasa, fivarotana lehibe, fanaovana fanatanjahan-tena sy birao sns General tanjona vokatra. Afaka manome endrika nohavaozina izy io.
Toetran'ny BROAD Kraft Facing Insulation
1. Mampitombo ny fahombiazan'ny insulation efa misy
2. Manakana ny fitomboan'ny bobongolo sy ny holatra
3. Mametraka haingana
4. Natao tamin'ny sakana taratra mirefarefa be
5. Mitaratra hatramin'ny 97% ny hafanana mamiratra
6. Mamaha sy manapaka mora foana
7. Mampitombo ny hery ny scrim matevina
BROAD PVC Facing Insulation dia manome insulation tena tsara: manohitra ny karazana famindrana hafanana avy amin'ny conduction, convection ary taratra. Ny sisin'ny polypropylène fotsy metabolized dia mamorona sakana mahomby amin'ny hamandoana, ny rivotra ary ny etona. Izy io dia vahaolana ara-toekarena amin'ny sehatra maro ary ampiasaina indrindra amin'ny fiatrehana ny insulation volon'ondry fitaratra, volon'ondry vatolampy, foam fingotra sns.
Endri-javatra ny BROAD PVC miatrika Insulation
1. Ny feo, ny harafesina, ny hazavana, ny etona dia azo sorohina tsara
2. Mba hitazonana ny fantsona rivotra mafana, ny fanamafisam-peo sy ny fofona, ny gorodona tsy misy hamandoana, sns
3. Eco-namana, hafanana mahatohitra ny fanorenana, sns
4. Henjana avo lenta
5. Tena tsara ny fanoherana ny etona rano
6. OEM dia misy. GMC mpamatsy tsara
BROAD FSK Aluminum Foil Tape vita amin'ny foil aluminium avo lenta manokana, voarakotra amin'ny adhesive akrilika / adhesive acrylic / adhesive acrylic solvent mahery vaika, izay manome fikitihana mafy, tanjaky ny peel tsara, tanjaka avo lenta ary fanoherana ny fahanterana.
Ny halavan'ny horonana
teo aloha: Volon'ondry seramika mahatohitra hafanana ambony
Manaraka: Karazana Sandwich Panel amin'ny kalitao tsara
Miatrika Batt Insulation
Mifanatrika Fiberglass Insulation
R11 Insulation tsy tava
R13 Miatrika Insulation
R13 Insulation tsy tava
R19 Miatrika Insulation
R19 Insulation tsy tava
R30 miatrika Insulation
R30 Insulation tsy tava
R38 Mifanatrika Insulation
R38 Insulation tsy tava
Insulation Batt tsy misy tava
Insulation Fiberglass tsy tava